တတိယလှိုင်း – DVB
ပြည်မြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၇ ဦးရှိလာ
ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့မှာ ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းကာလ သေဆုံးသူ ၇ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ပြီလို့ ဒေသခံ လူမှုကူညီရေးအသင်းဆီက သိရပါတယ်။
ပရဟိတအဖွဲ့ဝင် တဦးက "ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့က စစ်ကဲလမ်းလူနာက ပထမဆုံးပေါ့၊ အဲ့မနက်ပဲ ပြည်ဆေးရုံကြီးက အတည်ပြုလူနာ ၂ ယောက်ထပ်ဆုံးတယ်။ အောင်လံမြို့က လူနာတစ်ဦး ပြည်ဆေးရုံကြီးမှာ ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့လို့ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ သေဆုံးသူ ၄ ဦးရှိခဲ့တယ်။ ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှာတော့ ၂ ဦးနဲ့ ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့မှာ ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့လို့ စုစုပေါင်း ၇ ဦးရှိပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့က သေဆုံးသွားတဲ့ လူနာဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆေးကုဖို့သွားရင်း ဆေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ပြည်မြို့ကိုပြန်လာပြီး အိမ်မှာဆေးကုသရင်း သေဆုံးသွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာ သာယာဝတီ၊ လက်ပံတန်းနဲ့ မင်းလှမြို့နယ်တွေကိုတော့ Stay at Home အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပြီး၊ လူသေဆုံးမှုအများဆုံးက လက်ပံတန်းပြီးပါက ပြည်မြို့နယ်က ဒုတိယအများဆုံးလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်က ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာနေပါတယ်။ ယခုရက်တွေမှာဆိုရင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရောဂါပိုး စစ်ဆေးခံရသူအရေအတွက်ရဲ့ ၅% အောက် ပမာဏမှာသာ Positive လူနာတွေ တွေ့ရတော့တာမို့ အခြေအနေတိုးတက်လာနေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာ နိုင်ငံတကာမှာ ဗီဇကွဲမျိုးစိတ်သစ်တစ်ခု ထပ်မံပေါ်ထွက်လာတာမို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တတိယလှိုင်းဆိုတဲ့ စကားစုက ခေတ်စားလာနေပါတယ်။ မျိုးစိတ်သစ်ဟာ ကူးစက်နိုင်စွမ်းမြန်ဆန်သလို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိလိုက်ခင်မှာတင် ကမ္ဘာအနှံ့က တိုင်းပြည်တစ်ချို့ဆီကို ရောက်ရှိသွားတာပါ။ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဒီရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေရှိလာနေပြီမို့ မြန်မာနိုင်ငံထံကိုလည်း မကြာခင်မှာ ဝင်ရောက်မလာဘူးလို့ ပြောမရတဲ့အခြေအနေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့က နယ်နိမိချင်းထိစပ်မှုရှည်လျားပြီး ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကိစ္စတွေကြောင့် နေ့စဉ်ဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေ မပြတ်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကလည်း ရှိနေတယ်မဟုတ်လား။ တကယ်လို့ COVID-19 မျိုးစိတ်သစ်သာ ပြည်တွင်းကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင် စည်းကမ်းပိုင်းလျော့ရဲနေပြီဖြစ်တဲ့ ခုလိုကာလမျိုးမှာ တတိယလှိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြေက သိပ်ကိုမြင့်မားသွားမှာပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ လူတိုင်းက မျှော်လင့်နေကြတာကတော့ ကာကွယ်ဆေး ခပ်မြန်မြန်ထိုးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ ကာကွယ်ဆေးတွေက မျိုးစိတ်မျိုးကွဲတွေအားလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ တချို့သော ပညာရှင်တွေက ပြောဆိုထားတာကြောင့်ပါ။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေက ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလား ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူထုကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲလာတဲ့ ရောဂါပိုးသစ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အစပိုင်းတွေတုန်းကဆိုရင် ပိုးအသစ်က ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့များ ပတ်သက်နေလားဆိုပြီး ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ထင်ကြတာမျိုးတွေတောင် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိုးအသစ်က သဘာဝအတိုင်း မျိုးဗီဇပြောင်းလဲသွားတာသာဖြစ်ပြီးတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနံချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတာကတော့ ထန်းသီးကျွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်အခြေအနေလို့သာဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် ကာကွယ်ဆေးတွေက မျိုးစိတ်သစ်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရဲ့လားဆိုတာကို မေးခွန်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သလို တတိယလှိုင်းဖြစ်လာတာ့မှာလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်း မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဒါ၊ စပိန်စတဲ့တိုင်းပြည်တွေကတော့ တတိယလှိုင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်မယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်လည်း ကာကွယ်ဆေးအများစုဟာ ၂ ကြိမ်ထိုးနှံရပြီး ကာကွယ်ဆေး တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးအကြား ၂ ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ယူရတာက ရောဂါကပ်ဘေးကို ကာကွယ်ရေးမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အခက်တွေ့စေတယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အမေရိကန် ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကနေ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ တတိယလှိုင်းကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကို လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သုတေသနရလဒ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ လေ့လာချက်အရ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ တတိယလှိုင်းဖြစ်လာမှာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပြီး အကြောင်းအရင်းကတော့ ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချိမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ရောဂါကူးစက်နှုန်းထက် ပိုမိုနှေးကွေးနေတာကြောင့်လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ လက်တလောမှာ ကာကွယ်ဆေးအများစုကို လုံလောက်အောင် မထုတ်လုပ်နိုင်သေးသလို တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတဲ့ ဆေးဝါးအမယ်ကလည်း နည်းပါးနေပါသေးတယ်။ ထပ်မံထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေပေမယ့် လက်တလောထွက်ရှိနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို လူတိုင်းလက်ထဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းက အကန့်အသတ်နဲ့သာဖြစ်နေပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ရပ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာကြီးမြင့်တာကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တိုင်းပြည်တွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးလုံလောက်စွာရနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေတာပါပဲ။ ကာလီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေထက် Mask တပ်တာ၊ လက်ဆေးတာ၊ လူအချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာနေတာနဲ့ ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာတာတွေကသာ လက်တလောမှာ တတိယလှိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုဟာ ရေရှည်ပြဿနာတွေကိုသာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိ့မ်မယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းလိုက်နာ ဘေးကင်းကွာ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံလို ကာကွယ်ဆေးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှု လမ်းခုလတ်မှာသာရှိနေသေးတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးအတွက် တတိယလှိုင်းကို တားဆီးဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာခြင်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ ဆိုရမှာပါ။ . လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးတာ၊ . အပြင်သွားရင် Mask တပ်တာ၊ . လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ၆ ပေ အကွာမှာနေထိုင်တာ၊ . တတ်နိုင်သမျှ အပြင်မသွားပဲ နေအိမ်မှာပဲနေထိုင်တာတွေက တတိယလှိုင်းဖြစ်မလာအောင် တားဆီးပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ လက်တလောမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်နှုန်းကျဆင်းနေပါတယ်။ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအားနဲ့ လူထုကလည်း ပူးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ရောဂါကူးစက်နှုန်းကို ခုထက်ပိုပြီး လျော့ကျအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်သလို တတိယလှိုင်းဖြစ်မလာအောင်လည်း ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြပါရစေ။ ရေးသားသူ Ye Zon Aung ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။